I-33 yeeMasiksi eziLungileyo zeN95, abaPhefumli kunye nezinye iindlela (2021) - Impilo | Eyenkanga 2021
Inkampani, Iindaba Ekuhlaleni Impilo-Ntle Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Ukuphuma Uluntu, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Impilo Ukuzonwabisa Imidlalo Imfundo Yezempilo, Impilo Inkampani, Ukuphuma
Eyona >> Impilo >> I-33 yeeMask ezibalaseleyo ze-N95, ii-Respirators kunye nezinye iindlela ngo-2021
I-33 yeeMask ezibalaseleyo ze-N95, ii-Respirators kunye nezinye iindlela ngo-2021
I-123RF (iTorwai Suebsri)
Ngokwahluka kwe-Delta okusasazeka ngokukhawuleza kwilizwe lonke, iimeko ze-COVID-19 zibuyile kunyuka. Iingcali zonyango zisacebisa ukuba kwanaxa sigonyiwe kufuneka sihlale sikuphaphele ukunxiba iimaski esidlangalaleni kunye nokugcina umgama wethu.
I-PPE yebanga lonyango njengeemaski ze-N95 kunye nokuphefumla kuyaqhubeka nokubekwa phambili kwizibhedlele kunye nabaphenduli bokuqala, nangona zikhona izinto ezimbalwa ezikhoyo ezikhoyo ngoku eAmazon kwaye sizisusele phezulu kuluhlu lwethu. Ukuba uyazibuza ngezinye iindlela zokukhetha iimaski kunye nokuphefumla ukuze uzikhusele njengoko izinto zivulekile, sinoluhlu oluqinileyo lokukhetha. Ukuba uyazibuza malunga nokuchongwa okungafaniyo kunye nokuba bathetha ntoni, skrolela ezantsi kwesi sithuba apho uza kufumana inkcazo epheleleyo.
Ezi ndlela zokwenza imaski ze-N95 zibonelela ngamanqanaba okhuselo ahlukeneyo, kodwa akukho mbuzo wokuba banokudlala indima enkulu ekunciphiseni kwaye ekugqibeleni bayeke ukusasazeka kwentsholongwane. Okukhona sizimisele ngakumbi kukuzinxiba, ngokukhawuleza ubomi bethu bunokubuyela kuhlobo olutsha lwesiqhelo.
Ukuba unenkxalabo malunga neebhaktheriya ezihamba emoyeni, iintsholongwane kunye neentsholongwane ezungeze ikhaya lakho, i-UV air purifier yindlela efanelekileyo yokuyigcina ilawulwa, kwaye ukuba izifo ezibangelwa ngamanzi zixhalabisa kakhulu i-UV yokucoca amanzi isisombululo esikhuselekileyo. Isicoci se-UV-C sinokukuvumela ukuba ucoce ngokulula ifowuni yakho, amaqhosha, kunye nezinye izinto zakho ezincinci kwimizuzu nje embalwa.
Zeziphi ezona ndlela zibalaseleyo ze-N95 Mask kunye nezinye izixhobo zokuphefumla?
IKIMBERLY-CLARK N95 Ingxowa yesiphefumli (50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 45.00 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-3M 8511 N95 Uthuli lweMaski (Ipakethi eyi-10) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 24.86 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Makrite NIOSH Certified N95 Mask (20 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Uluhlu lwamacwecwe amane
Ixabiso: $ 28.31 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-N95 Enokugoqeka ebusweni (10 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 23.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ikhava yobuso be-Honeywell eDibeneyo yobuso eneefilitha ezingama-32 (Ipakethi ezi-4) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iphantse yasebenza njenge-N95
Ukukhuselwa kokukhusela kabini
Ukulawulwa ngokulula ukuphefumla
Ixabiso: $ 74.54 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
UKingfa KN95 Mask (50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ukucocwa okungaphezulu kwe 95%
Ixabiso: Iidola ezingama-33.50 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-HUHETA Ulwahlulo ezintlanu lweKN95 iimaski (20 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
95% + ukuhluza
Ixabiso: $ 15.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Kimberly-Clark KN95 Ipokotho yokuphefumla (i-50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 57.90 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-NIOSH ivunyelwe i-KN95 iimaski ezi-5 zoLuhlu lweeMaski (i-50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ukuxhathisa okuphantsi kokuphefumla
Maleko ezintlanu micro-ukuhluza
Ixabiso: $ 17.10 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-WesGen KN95 iMale Mask emihlanu (30 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
95% + ukhuseleko
Uphefumla kwaye ukhululekile
Ixabiso: $ 35.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ukunxiba iMask yokuSebenzisa uMbane Uphengululo loMthengi waseAmazon
Isantya fan ezintathu
Ixabiso: $ 39.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ulwahlulo ezintlanu KN95 / FFP2 Vuvu (50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iibhanti zentloko ezimbini
Ixabiso: $ 11.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-COVAFLU KN95 Inkunkuma elahlwayo yokuSonga ubuso beFlat (100 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ukhuseleko lweKN95 / FFP2
Ukucocwa kweepesenti ezingama-95%
Ixabiso: $ 50.00 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ukulahlwa kobuso be-3-Layer Face for Kids (50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Umntwana olungele umntwana
Ukuhamba kakuhle kweendlebe
Ixabiso: $ 18.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Organic Vapor Respirator kunye neCarbon Air Filter Uphengululo loMthengi waseAmazon
Idibana nemigangatho ye-ASTM E2952-14
Ixabiso: $ 79.97 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-DecoPro i-Ply Face Mask (10 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Isiqwenga sempumlo esihlengahlengiswayo
Ixabiso: $ 14.99 ngexabiso Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Smart Anti-Inkungu & Ucoceko loMoya ebusweni Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iifilitha ezingama-20 ezongezelelweyo
Ixabiso: $ 48.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ukubonelelwa ngee-RRS-KN95 iimaski (i-5 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Maleko ezintlanu ukhuseleko
Maleko ezimbini lokucoca electrostatic
Ixabiso: $ 10.98 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-KF94 Uluhlu lweSine lweFayile yokuFunda (i-20 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ukuthatha iipesenti ezingama-94 zeenkcukacha
Ixabiso: $ 24.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Umkhwa oThobileyo woMoya we-NIOSH ohambelana nesiqingatha seMask Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 19.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ililily Cotton Double Layer enokuhlambeka ngobuso buso Uphengululo loMthengi waseAmazon
Umaleko wokucoca owakhelweyo
I-Powecom KN95 Face Mask (10 Ipakethi) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 13.60 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Isiseko seNkampu M yoBuso beMask kunye neCrafti yeCrafti yeCombo esebenzayo (2 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ingena kakuhle ebusweni
Iifilitha zecarbon ezenziweyo
Ixabiso: $ 19.96 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Khathalela ii-Ply KF94 Face Mask (10 + 1 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Maleko ezine ukuhluza
Uyilo olufakelwe kwestiriyo
Ixabiso: $ 9.99 ngexabiso Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
V nguVye Ubuso beZikhuselo zaBantwana (i-10 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 30.44 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Emantla yiHoneywell Full Face Respirator Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 227,00 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ukhuselo lobuso olukhuselayo (20 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Yongeza omnye umaleko wokhuseleko
Elula kwaye ikhululekile
Ixabiso: $ 27.95 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ukulahlwa kweMaski yoBuso boBuso abathathu yaBantwana (i-50 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ilaphu lokucoca iMeltblown
Uyilo olukhethekileyo lokuphefumla
Ixabiso: $ 13.88 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
3M 6800 Isiphefumli sobuso esipheleleyo Uphengululo loMthengi waseAmazon
Inkqubo yokuthuthuzela efanelekileyo
Indawo ebanzi ebanzi
Ukukhusela ubuso ngokupheleleyo
Ixabiso: $ 129,99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I KISCHERS Isiqingatha sobuso Isiphefumli Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iyahambelana neefilitha ze3M
Iimaski zobuso ezihlambekayo + Iifilitha ezi-8 (Ipakethi ezi-4) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iifilitha zecarbon ezisibhozo
Ixabiso: $ 13.99 ngexabiso Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-SYINE yoKhuseleko lweHlf Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iibhloko ezingama-96% zomphunga ohamba ngomoya
Iza kunye neefilitha zokutshintsha
Itywina leSilicone lokulunga ngcono
Ixabiso: $ 29.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ukuphefumla ubuso beBandana (6 Pack) Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ijongeka ipholile kunemaski
Flexible iinketho zoyilo
Ixabiso: $ 15.98 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Uphengululo lwethu olungenamkhethe
1.I-KIMBERLY-CLARK N95 Isingxonxo sokuphefumla (50 Pack)
Ixabiso: $ 45.00 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
I-NIOSH ilinganise ukukhuselwa kwe-N95
Iibhanti ezimbini ezibanzi
Isiqwenga sempumlo esihlengahlengisiweyo kunye nentuthuzelo yegwebu ngaphakathi
Uyilo lwengxowa lwenza ukuphefumla kube lula
Ayilungelanga ngokuqinileyo njengamanqanaba ezonyango iimaski ze-N95
Isiqwenga sempumlo siqinile kwaye kunzima ukusilungisa
Uhlobo lwengxowa lubukeka luhlobo lwebhili yedada xa inxityiwe
Elinye lamagama okuqala kwezempilo, uKimberly-Clark wenze ukuba lifumaneke le NIOSH yamkele imaski yokuphefumla ye-N95 ngelixa imfuneko inkulu. Ezi maski ziphefumla nzulu, ukanti zinika i-95% yokuhluza ukuya kuthi ga kwi-0.3 microns. Uyilo lwesingxobo luvumela indawo ethe kratya ngaphakathi kwemaski ukuyenza ukuba ingabinantsingiselo kwaye ke uziva ngathi awuzukulwa nomoya.
Inesiqwenga sempumlo esihlengahlengisiweyo ukuqinisekisa ukuba isitywina esihle. Ngaphakathi kukho amagwebu akhululekileyo empumlweni, kunye nelaphu elithambileyo elithambileyo ecaleni kolusu lwakho. Amabhanti amabini abanzi agcina imaski ikhululekile ngaphandle kokutsala ulusu okanye iinwele. Ngelixa zingadibani kakuhle njengamabala ezonyango e-N95, banikezela ngokhuseleko olukhulu kunamaphepha alula okanye iimaski zelaphu.
Fumana ezinye i-KIMBERLY-CLARK N95 Particulate Respirator ngolwazi kunye nokuphononongwa apha.
2. 3M 8511 N95 Uthuli lweMask (10 Pack)
Ixabiso: $ 24.86 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukhuseleko lwe-NIOSH lwamkelwe nge-N95
Imithombo yeendaba yokuhluza ihlawuliswe ngombane ukwenza ukuphefumla kube lula
Ukupholisa kweValve ePholileyo kunciphisa ubushushu
I-3M brand yenye onokuyithemba
Ishushu kunelaphu okanye imaski yephepha
Spendy ngexabiso lemaski nganye
Ukuba ujonga imaski ye-N95 evunyiweyo ye-N95, unokuqiniseka ngomgangatho xa uthenga le mask ye-N95 isuka kwi-3M . Ngelixa ezi maski zibonisa utyikityo lwe-3M yeValve yokuHamba okuPholileyo, zakhelwe ukuthuthuzelwa nangezinye iindlela ngenxa yomsizi wempumlo ohlengahlengiswayo. Imithombo yeendaba yokuhluza yelungelo elilodwa enee-microfibers ezihlawuliswe ngombane kunceda ekwenzeni ukuphefumla kube lula kuthuthuzelo lomsebenzisi oluphuculweyo. Ukuchongwa kwe-P95 kuthetha ukuba le maski iyasebenza ngama-95% ekucoceni iinkcukacha ezingezo-oyile.
Le maski iza kwipakethe ye-10, iyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo, ngakumbi ukuba unonxibelelwano ngeemeko zonyango. Ngokutsho koqikelelo lwamva nje, iingcali zibonisa ukuba ingozi yeCoronavirus isaza kuchaphazela umhlaba ubuncinci kude kube ziinyanga zehlobo.
Fumana ngakumbi i-3M ye-NIOSH evunyiweyo yeParticulate Respirator 8200 (2 iipakethi ezili-10) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
3. IMakrite NIOSH Certified N95 Mask (20 Pack)
Ixabiso: $ 28.31 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukukhuselwa kwe-N95 ukuya kuthi ga kwi-PM0.3
Indwangu efanelekileyo engalukanga
Ixabiso elibiza imaski nganye
Impumlo efanelekileyo ayilungelanga wonke umntu
Ezi maski zeMakrite N95 lolunye uphawu esingakhange sikwazi ukulukhusela, kodwa sifuna ukukunika ukhetho ngelixa lifumaneka. Kwicala elingasentla, iqinisekisiwe i-NIOSH kwaye inamanqaku amane okucoca. Le maski yenziwe ngelaphu elingalukwanga kwaye iziva ikhululekile ecaleni kolusu. Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zamaphepha, ikhowuni esele yenziwe ayitshoni xa uphefumla.
Iklip yeempumlo ehlengahlengisiweyo eyakhelweyo iyayivumela ukuba ilingane uninzi lobuso. Icoca iipesenti ezingama-95 zezinto ezingenamafutha ukuya kuthi ga kwi-PM0.3 kubandakanya neentsholongwane.
Fumana ngakumbi ulwazi ngeMakrite NIOSH Certified N95 Mask (20 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
4.I-N95 enefolda yobuso beMask (10 Pack)
Ixabiso: $ 23.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Phakathi kweemaski ezimbalwa ze-N95 ezikhoyo ngeli xesha
I-liner yangaphakathi ye-silicone ivumela iimaski ukuba zitywinwe ngcono emlonyeni nasemmpumlweni
Akukho ziqulatho zokucaphukisa ulusu
Iimaski azifanelanga ubuso bomntu wonke ngokunjalo
Itywina lesilicone lenza ukufuma okungaphezulu ngaphakathi kwemaski
Xa ufuna ukuzithemba okuza nemaski yeN95, ngakumbi ngokukhanya okwahlukileyo kweDelta, Le pakethi ilishumi yeemaski ezisongekayo Ukusuka kwimpilo kuya kukunika ukhuseleko onokuziva ulungile ngalo. Le maski ikhusela eluthulini nakwiinkcukacha ezincinci njenge-2.5PM. Esinye isiqinisekiso oya kusixabisa kukuba ezi maski ziyahlangabezana nemigangatho yokhuseleko lwe-NIOSH.
Iimaski zibonisa impumlo ehlengahlengisiweyo ukuqinisekisa ukuba ulungile kodwa ulungile kwaye imitya ephindiweyo iyahlengahlengiswa ukuqinisekisa ukuba ukhululekile ngaphandle kwemaski etsala ezindlebeni zakho. Ngama-95% okucoca ulwelo, ezi maski zikwanomda we-silicone webanga lonyango ngaphakathi ukwenza itywina elisebenza ngakumbi empumlweni nasemlonyeni, ukunciphisa amathuba okudluliselwa kwentsholongwane.
5.I Honeywell Dual Layer Face Cover with 32 Filters (4 Pak)
Ixabiso: $ 74.54 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Iindlela ezine zokuzoluka zilunge ngakumbi
Iklip yempumlo ehlengahlengisiweyo kunye neziporo zeendlebe
Iifilitha ezoneleyo zokutshintsha inyanga yokunxiba imihla ngemihla
Kubiza kakhulu kuneemaski ezilahlwayo
Iimaski ezimbini zomaleko kufuneka zihlanjwe rhoqo
Ilaphu eliziweyo lishushu ngakumbi kwezinye iimaski
Ukuba ujonge imaski eyi-N95 esebenzayo enokukugcina ekubeni ungaziphindi kabini, esi sigubungelo sobuso sokumbozwa kabini Ukusuka eHoneywell yintshatsheli epheleleyo. Le pakethi ineemaski zobuso iza neefilitha ezingama-32 zokutshintsha ezinceda ekupheliseni ngaphezulu kwe-98% yamasuntswana anobukhulu obuyi-0.3-micron (BFE) kunye ne-0.1-micron-sized particles (PFE). Iphantse yaphumelela njengemaski eyi-N95 yokwenyani.
Iimaski ezibambe ngambini zibonisa ukwakheka okulu-3 okulingeneyo okunikezela ngeendlela ezi-4 zokolula kunye nokunciphisa izikhewu kunye nokunyusa intuthuzelo ngokubanzi kunye nokukhuselwa. Iiluphu zendlebe ezinokuhlengahlengiswa kunye neklip yeempumlo ziphucula ukusebenza kwaye zilungele. Uyilo oludibeneyo lubonakala ebusweni lwenza ukuphefumla kube lula ngakumbi.
Iifilitha zokutshintsha zenzelwe ukuba zilingane ngokugqibeleleyo kwimaski kwaye zisetyenziselwe usuku kuphela, kodwa eyona nto intle kukuba iimaski ngokwazo zinokuhlanjwa kwaye ziya kubambelela kunxibo oluninzi.
Fumana ngakumbi uHoneywell Dual Layer Face Cover with Filters (4 Pack) ulwazi kunye nohlolo apha.
6.I-Kingfa KN95 Mask (50 Ipakethi)
Ixabiso: Iidola ezingama-33.50 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Imigangatho emihlanu ikunika okungaphezulu kunama-95% ukuhluza
Ixabiso elifanelekileyo lokufumana ipakethi engama-50
Musa ukulingana ubuso bomntu wonke kakuhle
Kunzima ukufumana itywina eliqinileyo
Xa ukhangela iindawo ezintlanu zokuzikhusela, imaski yeKingfa KN95 lukhetho olufanelekileyo. Esi sigqubuthelo sokuhluza sikhupha ama-95% ezinto ngaphandle kokubanzima ukuphefumla. Sinezinto ezibini ezinyibilikayo ezinyibilikisiweyo, izambatho zelinen ezingalukanga ezibini, kunye nomoya oshushu ongafakwanga womqhaphu ukuze ubambe amasuntswana omoya.
Izikhonkwane zeendlebe ezineentsimbi zithetha ukuba akukho ziqulatho zokucaphukisa ubuso bakho kwaye uthambile uthambile emqolo weendlebe zakho nasemva kweeyure zokunxiba. Ezi maski zikwanendawo yokufihla impumlo yentsimbi enokuhlengahlengiswa ukwenza itywina eliqinileyo elijikeleze impumlo yakho kunye nokunciphisa ukufiphala kweiglasi kunye nezinye izambatho zamehlo.
Le pakethi enkulu ye-50 lutyalo-mali olulungileyo ukuba kuya kufuneka uphume uye eofisini okanye ufuna iihambo rhoqo kude nekhaya lakho.
Fumana ngakumbi uKingfa KN95 Mask (50 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
7. I-HUHETA Ulwahlulo ezintlanu lweKN95 iimaski (20 Pack)
Ixabiso: $ 15.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Iimaski zisonge tyaba ukuze zigcinwe lula
Ukucocwa kwamanqanaba amahlanu e-95% + yamasuntswana
Ubhityile kunabanye kwimigca edityanisiweyo
Isenokubangela ukuba iiglasi zibe nenkungu
Izikhonkwane zeendlebe zenza ukulungeleka okuqinileyo
Xa ujonge imaski evunyiweyo ye-FDA, IHUHETA KN95 imaski yobuso lukhetho olunokuthenjwa olunikezela ngeendlela ezintlanu zokucoca ulwelo usebenzisa i-100% yelaphu ye-polypropylene. Le pakethi ye-20 yemaski ibonelela ngereyithi yokuhluza engama-95% +. Basebenzisa izaleko ezibini zezinto ezinganyibilikiyo ezinyibilikisiweyo ezinyinyithekileyo ngobukhulu obulinganiselweyo bokufumana ukufakwa kwamasuntswana afanelekileyo. Isihluzi se-electrostatic sisebenza ngokufanelekileyo ekuhluzeni amasuntswana. Isicoci sabo se-impedance esinevumba eliphantsi senza ukuphefumla kube lula ngakumbi.
Ezi maski zisonge tyaba, kwaye zibonisa isiqwenga sempumlo esibonakalayo. Banobungakanani obulinganiselweyo bokukugquma ngokupheleleyo ukusuka kwibhulorho yempumlo ukuya ezantsi kwesilevu sakho, oko kuthetha ukukhuselwa okungcono kwiintsholongwane kunye nezinye iingozi zokusingqongileyo. Isakhiwo se-3D sibonelela ngokulingana kobuso obufanelekileyo kwaye ii-loops ze-elastic elastic azithethi ukungaphatheki kakuhle ezidleleni zakho kwimixokelelwane enamakhonkco.
Ukuba uthenga igumbi lokufundela okanye indawo yokusebenzela, uyakuxabisa ukuba zisongelwe zodwa.
Fumana ezinye izinto zePixi Creations KN95 ulwazi olulahlwayo lobuso (20 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
8.I-Kimberly-Clark KN95 Isingxotyi somoya (50 Pack)
Ixabiso: $ 57.90 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukucoca i-N95 ngokuvunywa kwe-NIOSH
Uyilo lwengxowa ludala igumbi lokuphefumla elikhudlwana nelikhululeke ngakumbi
Imitya yentloko isusa ukucaphuka emva kweendlebe zakho
Iintloko zentloko ziyamosha iinwele zakho
Impumlo yentsimbi ibukhali
Uyilo luhlobo lokujonga okungaqhelekanga
Le NIOSH yamkele isixhobo sokuphefumla se-KN95 ibonelela ubuncinci bokucoca ngokusebenza kwe-95% yamasuntswana emicron. Uyilo lwengxowa ludala igumbi elikhulu lokuphefumla eliya kuthi ga kwiipesenti ezingama-75 likhululeke ngakumbi kunezinye zoyilo phaya, lisenza ukhetho olufanelekileyo, ngakumbi ukuba unovakalelo lokuziva ngathi awufumani moya ngokwaneleyo kwisigqubuthelo sobuso bakho.
Ezi zine-design strap yentloko egcina indlebe kwaye ayifaki uxinzelelo ezindlebeni zakho, nangona ngokuqinisekileyo iya kuziphazamisa iinwele zakho ukuba yinkxalabo leyo. Ikhonkco lempumlo elifihliweyo likuvumela ukuba uhlengahlengise ukulunga kubume bakho bobuso ukwenza itywina elingcono kunye nokukhuseleka okusebenzayo. Ngeemaski ezingama-50 kwiphakeji nganye, ixabiso leqhekeza ngalinye lisengqiqweni.
Fumana ezinye iinkcukacha zeKimberly-Clark KN95 Pouch Respirator (50 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
9.I-NIOSH evunyiweyo ye-KN95 iimaski ezi-5 zoLuhlu lweeMaski (i-50 Pack)
Ixabiso: $ 17.10 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Inkqubo ezintlanu yenkqubo yokucoca ulwelo enesihluzi esikhulu esongeziweyo
Iibhanti ezikhululekileyo ngaphandle kokutya
Akukho lwazi lufumanekayo
Alukho olunye ulwazi olufumanekayo
Ukuba ubukhangela ukhetho oluthembekileyo lwe-KN95, le 50 pack yemaski i-NIOSH yamkelwe kwaye inezinto ezininzi ezinokuthetha ngazo. Kuba akukho hlaziyo lwabathengi, sinokukuxelela kuphela ulwazi olusisiseko malunga nabo, kodwa asikafumani zandla kubo ukuza kukunika uluvo olupheleleyo. Siyabona ukuthengisa kuhamba ngasemva, nangona kunjalo, ke sifuna ukuba ube nolona khetho lukhoyo.
Le maski inelaphu elilungele ulusu ngaphakathi ngenkqubo eyomeleleyo yomaleko ezintlanu ukukhusela kumasuntswana nakwiintsholongwane- umaleko ochukumisa ulusu lwakho ulandelwa ngolungelelwaniso lolwakhiwo, umaleko wokubamba onyibilikayo, umaleko oshushu womqhaphu womoya, isiponji sokucoca ulwelo , kunye nephetshana elikhulu elingalukanga elinqanda umaleko ongaphandle.
Fumana ulwazi ngakumbi lweMaski yoKhuseleko lweMaski yoKhuseleko kunye nokuphononongwa apha.
I-WesGen KN95 iMaski emihlanu yoLuhlu (30 Pack)
Ixabiso: $ 35.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ingena ngobuso obuphakathi ukuya kobukhulu kakuhle
Iklip yempumlo yentsimbi eguqulwayo ukuqinisekisa ukulunga kobuso
Ukhetho lwemibala emithathu kwiphakeji nganye
Ukuhluza maleko ezintlanu
Ubhitye kunabanye okhuphisana nabo
Iipopu zeendlebe zinokubangela ukucaphuka
Olunye uqhekeko lomtya luxeliwe
Zininzi iimaski zeKN95 kwintengiso, kangangokuba kunzima ukwazi ukuba leliphi ixabiso, nangona kunjalo, ukuba ungumntu ohamba ngokulinganisa njengesalathi, uya kuthanda ezi maski zivela kwi-WesGen . Ziyaziwa kakhulu ngabasebenzisi, kwaye zihlala zihoywa. Yenziwe ngamalaphu amathathu engalukwanga kunye namalaphu amabini anyibilikiweyo, ziyaphefumla kwaye zikhululekile.
Ezi zinto zibonisa ikliphu yempumlo yentsimbi efihliweyo ekuvumela ukuba uhlengahlengise ukulunga kobuso obuhle, kwaye oko kuye kwaqatshelwa ngokukodwa kwiintsuku zamva nje ukuze kube yinto ephambili ekuthinteleni ukuhanjiswa kwentsholongwane. Banikezela ngama-95% + ukhuseleko ngokuchasene ne-particulates ukuya kuthi ga kwi-PM2.5. Ibhokisi nganye ye-30 iqulethe ishumi kwimibala emithathu, itywinwe-ngetywina ukuqinisekisa ukuba bahlala becocekile.
Fumana ngakumbi iWesGen KN95 ulwazi lweeMaleko ezintlanu (30 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
11. Umbane woMntu oMbane oSebenzayo
Ixabiso: $ 39.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Indwangu ye-Neoprene ilingana nobuso bakho
Isiqwenga sokuphefumla abicah asivuzisi moya
Isantya fan fan
Elesibhozo ubomi bebhetri kunye nokutshaja kwe-USB
Iifilitha zihlala ixesha elide
Kunzima ukufumana izihluzi zokutshintsha
Uziva ushushu emva kweeyure zokunxiba
Ukulingana ebusweni yeyona ngxaki inkulu xa kufikwa ekufumaneni imaski yobuso esebenzayo, kodwa le maski yombane smart ifaka imaski yokuphefumla yangaphakathi yesilicone evumela ukuba kulunge ngaphandle kokuvuza komoya. Umlinganiso oncomekayo we-99.98% yenqanaba lokucoca (ukuya kuthi ga kwi-0.3 microns) enkosi kumaleko amane, ulungelelwaniso oluphezulu lokudibanisa. Ubume bekhabhoni bubamba uthuli, umphunga, kunye nezinto ezihamba ngomoya, kodwa ikwanaso nesihluzo sokulwa iintsholongwane, kunye nefilitha yeHEPA ngokunjalo.
Isigqumathelo senziwe ngelaphu eloluliweyo le-neoprene ukuze ilingane ngokulula imijelo yobuso bakho. Umtshini wombane unokuhlengahlengisa isantya esithathu, kwaye unokuthembela ukuya kuthi ga kwiiyure ezintlanu zokusebenza, nangona, ukuba ufuna ukuphinda ugcwalise ngokukhawuleza, le maski inezibuko le-USB ukwenza ukutshaja kubhabho kube lula. Le maski iza neefilitha ezintlanu zokutshintsha, nganye nganye ineeyure ezili-12 zobomi bokusebenzisa.
Fumana ngakumbi i-GREENWISH N95 Electric Smart Mask enolwazi kunye nokuphefumla kunye nokujonga apha.
12.Lo maleko ezintlanu KN95 / FFP2 Vuvu (50 Pack)
Ixabiso: $ 11.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukucocwa kweepesenti ezingama-98% ukuya kuthi ga kwi-2.5PM
Isakhiwo esixhasayo esisodwa sokulunga okungcono
Kulula ukukhupha ngaphandle kwezinye
Amacwecwe amahlanu okucoca ulwelo kubandakanya iindawo ezimbini ezinyibilikisiweyo
Ixabiso eliphantsi kwisiqwenga ngasinye
Le pakethi ye-50 yemaski ye-KN95 / FFP2 Uyilo oluqhelekileyo oluya kuthakazelelwa ngabaninzi abafuna ukhetho olungenasiseko. Ezi maski zibonakalisa ii-loops ezindlebeni, kunye nokuphefumla kakuhle. Amacwecwe amahlanu okuhluza aquka isihluzo esikhulu samasuntswana, umaleko ombane ogcwaliswe ngombane kunye namanqanaba amabini onyibilikayo ukubamba ngaphezulu kwe-95% yamasuntswana ukuya kuthi ga kwi-2.5 PM, kunye nolwahlulo lwe-antibacterial olunceda ukuthintela ukukhula kwebhakteria okunokwenzeka ngaphakathi kwimaski.
Esi sigqubuthelo sobuso siyilelwe ngokukodwa ukuba silingane neejika kunye nee-engile zobuso bakho, kunye nesakhiwo esixhasayo esingacinezeliyo okanye sibopha. Ngelixa kubiza kakhulu kunezinye iimaski zeKN95, le mask ibonakalisa ukusebenza ngokuhluza okuphezulu kuninzi.
Ezi maski zintsha eAmazon ngenxa yoko zimbalwa iingxelo zabathengi ezikhoyo ngeli xesha.
Fumana ulwazi ngakumbi lwe-KN95-FFP2 yoPhuculo lweNtsebenzo ePhakamileyo kunye novavanyo apha.
13. I-COVAFLU KN95 ilahlwa kwiFold Flat Face Mask (100 Pack)
Ixabiso: $ 50.00 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Amacwecwe amane e-polypropylene anika ukuhluza okuhle
Zisongelwe zodwa ukuze zihlale zingenantsholongwane
Ukukhululeka kwendlebe ephambuka kwindlebe
I-CE iqinisekisiwe kwaye yenziwa eBritane
Izinto ezibonakalayo zibonakala zincinci kunezinye iimaski
Iimaski zinevumba xa zivulwa kuqala
Ivumela ukuphuma komoya okwaneleyo kwiiglasi zenkungu
Xa ufuna ukuqinisekiswa kwemaski yobuso eqinisekisiweyo ye-CE, Imaski yeCOVAFLU KN95 inokuba yile uyifunayo. Le maski ibonelela ngeendlela ezine zokucoca ulwelo, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-95 ukhuseleko. Yenziwe yinkampani yemaski yaseBritane, le maski inezinto ezisemgangathweni zokwakha, izibophelelo zeendlebe ezi-ethe-ethe, kunye nesiqwenga sempumlo esifihliweyo sokuqinisekisa itywina elikhuselekileyo ebusweni.
Imaski nganye iza isongelwe ngokwahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba akukho kungcoliseka kuvela kumasuntswana omoya. Le pakethi ye-100 yemaski yenziwe nge-100% yeepolypropylene ukuze ikulungele ukunxiba nokuphefumla. Uyilo olusimahla alunangxaki kwaye luhlala ixesha elide. Oku kufikeleleka ngakumbi kwaye kwenza ukhetho olufanelekileyo kwabo babuyela eofisini okanye kwindawo yokufundela.
Fumana ngakumbi I-COVAFLU KN95 Ulwazi olunokulahlwa lweFold Flat Face (100 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
14. Iimaski ezi-3 eziLalelweyo zoBuso zaBantwana (50 Pack)
Ixabiso: $ 18.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ifikeleleka kakhulu ngeziqwenga ezingama-50
Ngaphambili isinciphisi kulula ukulungelelanisa
Ukucoca umaleko omathathu kulula ukuphefumla kuwo
Uyolo loyilo olulungele abantwana
Kulungile ukuba unxibe into enye
Olunye usilelo lomtya luxeliwe
Akukho siqwenga sempumlo sinokuhlengahlengiswa
Ukuba ukuthatha abantwana bakho ngaphandle kuyimfuneko, kunzima ukubaqinisekisa ukuba banxibe imaski yobuso, kodwa ezi maski zabantwana ziyilwe nazo engqondweni, zilinganisiwe ukuze zilingane ngokuchanekileyo. Yenzelwe abantwana ukusukela kwiminyaka emi-4 ukuya kweli-12, ezi maski zibonelela ngeendlela ezintathu zokulungiselela ukungaphothi, ezenza ukuba kube lula ukuphefumla ngaphakathi nangaphantsi kwe-claustrophobic.
Zibonisa ii-earloops ezithambileyo zokuzigcina zintofontofo, kwaye umphambili ocoliweyo ubenza ukuba kube lula ukulungelelanisa ngokufanelekileyo. Oku kuya kusebenza nakubantu abadala abanobungakanani obunciphayo kunye nobume bobuso. Baxabisa ngexabiso ngebhokisi yeemaski ezingama-50, kodwa hlala ukhumbula ukuba ezi ziingceba ezisebenzisa into enye.
Fumana ngakumbi i-3-Layer Face Mask for Kids (50 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
15. Isiphefumli se-Organic Vapor ngesiCoci seCarbon Air esisebenzayo
Ixabiso: $ 79.97 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Esebenzayo kwezempilo kunye nokhuseleko lomsebenzi
Isixhobo selizwi sivumela unxibelelwano olucacileyo kungxamiseko
Icebo lokucoca ulwelo elisebenzayo
Kunzima ukulungelelanisa imitya ukuze ibambe itywina eliqinileyo
Nokuba ukhathazekile malunga ne-coronavirus, umkhuhlane, okanye imiba yomgangatho womoya ngokubanzi yokuhamba okanye ukusebenza, esi siphefumli se-Organic Vapor buso obugcweleyo obufikelela kwimilinganiselo engqongqo yokhuseleko ukugcina ukhuselekile. Le maski ihambisa ukhuseleko kwinqanaba lokudibana Imigangatho ye-ASTM E2952-14 Kwaye iqinisekisiwe ngamaZiko kaZwelonke oKhuseleko eMsebenzini kunye neMpilo (NIOSH).
Iibhanti zentloko zigcina le maski ikhuselekile ngokukhuselekileyo ukunqanda ungcoliseko lungangeni, kwaye iilensi ezichasene nokukrwela zibonisa umaleko wenkungu ukwenza ukubonakala kukhuseleke kwaye kungaguquguquki. Uyilo lokuhamba komoya ngaphakathi kwemaski kukwacutha nenkungu. Le maski ikwanaso nesixhobo selizwi esivumela unxibelelwano olucacileyo kwiimeko ezingxamisekileyo.
Le maski isebenza kwimimandla emininzi yokhuseleko kunye nempilo kwaye ikhusela ngokuchasene neegesi kunye nomphunga, njenge-benzene, aniline, i-carbon tetrachloride, i-nitrobenzene, i-chloropicrin, i-chlorine, i-acetone, utywala, i-carbon disulfide, i-carbon trichloride, i-bromomethane, i-nitroalkane, njl.
Fumana ngakumbi i-Organic Vapor Respirator enolwazi ngeCarbon Air Filter ngolwazi kunye nokuphononongwa apha.
16.I-DecoPro I-Ply Face Mask (10 Pack)
Ixabiso: $ 14.99 ngexabiso Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ixabiso elifanelekileyo leemaski ezili-10
Ukucocwa kwamanqanaba amane ngamanqanaba amabini anyibilikayo
Impumlo yentsimbi isenokungathandeki
Imitya yeendlebe inde kakhulu kwabanye
Ngelixa injongo yethu yoqobo apha yayikukubonelela ngeemaski ze-N95 ezilungileyo, sikwaqonda ukuba ziyafumaneka ngokungqongqo kwizibhedlele nakubaphenduli bokuqala. Kungenxa yoko le nto sikhethe ukuyifaka le nto imaski ezine zobuso beeply . Ngamaleko amane okucoca ulwelo, obu buso bobuso bucoca i-95% yamasuntswana aphefumlelweyo emoyeni, kubandakanya ubuninzi bezinto zokucoca ulwelo ezinyibilikayo. Isigqumathelo senziwe ngezinto ezinobuhlobo kulusu kunye noyilo lwebhulorho yempumlo ehlengahlengisiweyo ukuze ube nakho ukunxiba ngakumbi. Inika isiqwenga sempumlo esihlengahlengiswayo, kunye nemitya emibini yokubhabha enikezela ukulungeleka okukhuselekileyo.
Inqaku lamaxabiso lingeneka kwaye kwiphakheji ye-10, ezi maski zinokuthengwa kakuhle kwimeko yeofisi. Iyafana nezinye iimaski ze-KN95 kunye neemaski ze-FFP2 ezihluza iinkcukacha ukuya kuthi ga kwi-2.5PM. Ukuba ukhangela iPPE ngendawo enkulu yokusebenza, unokufumana ezi maski kuyo ipakethe eyi-1 000.
Ukuba unenkxalabo malunga nokudluliselwa kwentsholongwane kwii-smartphones zakho, kunye nezinye izinto ezizezakho, ii-UV sterilizers zeofisi ngekhe ibe ngumbono ombi ngokunjalo.
Fumana ezinye iinkcukacha ezine ze-Ply KN95Mask kunye nokuphononongwa apha.
17. Smart Anti-Inkungu & Ucoceko loMoya ebusweni
Ixabiso: $ 48.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukubumba kwe-silicone kuqinisekisa ukulunga kobuso
Ukulungelelaniswa kwesantya sesithathu kwenza ukuba kube lula ukuphefumla
Inokutsha kwakhona nge-USB
Imibala emithathu onokukhetha kuyo
Ubungakanani buhamba bukhulu
Yenza ingxolo xa iqhuba ifeni
Yenza ukuthetha kube nzima ngakumbi kunezinye iimaski
Siza kutshintshela ukucinga kwakho, ukusuka kwiphepha kunye neemaski zelaphu ukuya esi sipholileyo siphefumla sisebenza kwakhona Iyahlambeka kwaye iza neefilitha ezintlanu ze-HEPA zokukunika ukhuseleko lwe-N95-N99. Banikela ngama-98% okucoca ulwelo ukuya kuthi ga kwi-2.5PM. Indawo yokuphefumla ineempawu ezizodwa ezintathu zangaphakathi ezenza ukuba ukuphefumla kube lula. Xa umoya wokungenisa umoya utsalwa kwimithombo yeendaba yeefilitha kwaye xa uphefumlela ngaphandle uyaphuma ungene kwimingxunya.
Isivingco sokuphefumla kunye necebo lokucoca ulwelo linciphisa nge-45-50% yokuxhathisa komoya okwenza kube lula ukuphefumla ngobushushu obuncinci kunye nokuncipha ngaphakathi kwimaski. Uyilo lomtya olunokuhlengahlengiswa lukugcina ukhululekile kwaye imaski izinzile ebusweni bakho. Ngenxa yetywina le-silicone, ilingana phantse kubo bonke ubuso nobungakanani. Kuza nezinto zokucoca ezingamashumi amabini zibandakanyiwe.
Ngenxa yokuba le maski inokutsha kwakhona, ungayisebenzisa iiyure ezintlanu ukuya kwezisibhozo ngentlawulo nganye kwaye yakhelwe ukuba ibe nobomi beyure yabalandeli. Ifeni inokuhlengahlengiswa ngokulula ngeqhosha ngqo ngaphambili kwimaski.
Fumana ngakumbi i-Smart Anti-Fog kunye nokuCoca uMoya ngolwazi lweMask kunye novavanyo apha.
18.Ukubonelela ngeRIDA-KN95 iimaski (5 Ipakethe)
Ixabiso: $ 10.98 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Xa zinxitywe ngokufanelekileyo ezi maski zibonelela ngaphezulu kocociso olungama-95%
Maleko ezintlanu ukuhluza kunye maleko ezimbini electrostatic ukuhluza
Ngamana inkungu iiglasi zakho
Kuthatha ukuziqhelanisa nokulungelelanisa kakuhle
Ipakethi ezintlanu zeemaski ze-SupplyAID KN95, xa isetyenziswe ngokufanelekileyo, ikunika ngaphezulu kwe-95% yokhuseleko ukusuka kumasuntswana ukuya kuthi ga kwi-2.5PM ngokobungakanani. Ezi maski zisihlanu zisongekayo zinesiqwenga sempumlo esifihliweyo esikuvumela ukuba ulungele imaski ebusweni bakho. Iziporo zeendlebe ezifanelekileyo zenziwe nge-welding ukunqanda ukucaphuka kwizinto eziyintloko. Ukongeza kwithemba lakho, baqinisekisiwe nge-CE.
Ezi maski zibonelela ngeendlela ezintlanu zokuhluza kubandakanya umaleko othambileyo ongalukwanga wentuthuzelo ecaleni kobuso bakho, umaleko womqhaphu, iileya ezimbini zokucoca ukufakwa kombane, kunye nomaleko ongaphandle welaphu elingalukwanga. Izikhonkwane zeendlebe zinokubekwa endaweni yokuqinisekisa ukutywina okuqinileyo ebusweni bakho.
Unokufumana kwakhona imaski ngevalufa yomoya Oko ngokuqinisekileyo kwenza ukuphefumla kube lula kwaye iindleko ziidola nje ezimbalwa ngaphezulu.
Fumana ezinye iiMasks ze-SupplyAID RRS-KN95 (5 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
19. I-KF94 Isakhelo sokucoca iMaleko (i-20 Pack)
Ixabiso: $ 24.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukucocwa kwe-KF94 kuthabatha iipesenti ezingama-94 zomoya ojikelezayo
Ibhulorho yempumlo eyahlukileyo ivumela ukulungeleka okungcono kwaye inciphisa ukubonakala kwamehlo
Ukutya okushiyekileyo okushiyekileyo ngokulula
Yiba nephunga elingaqhelekanga xa uvulwa kuqala
Akukho lwazi lokureyitha kwiphakheji
Zive unciphile kuneemaski zeKN95
Uyilo lwezi zinto I-KF94 iimaski zobuso ivumela ukulungeleka okungaphezulu kwebhulorho yempumlo ibenza ukuba bakhululeke ngakumbi kwabo banxiba iiglasi njengoko benciphisa ukungqubeka, ukuwa kwezinye iimaski. Inkqubo yokuhluza umaleko mane ithimba iipesenti ezingama-94 zomoya ojikelezayo. Uyilo olwahlukileyo luvumela ukugubungela ubuso obupheleleyo ukusuka empumlweni kuye ezantsi kwesilevu. Ii-earloops ezifumaneka simahla zithetha ukucaphuka okuncinci ezidleleni ukuba ungomnye ekufuneka enxibe imaski yobuso ixesha elide.
Khange sikwazi ukuvavanya ezi maski ukuthuthuzela kunye nokuqina, kodwa zibonakala ngokungathi ziya kuba zilungele ukusetyenziswa kweofisi ukuba ubuyele emsebenzini. Siyazi ukuba abanye abantu bayabakhathalela iindlebe ezinokuthi zicaphukise emva kwexesha elide. Ukukugcina kolo hlobo lokucaphuka, ungasoloko ufumana i- ibhanti yentloko enamaqhosha ezibambe iziporo zendlebe kunokubeka uxinzelelo ezindlebeni zakho.
Fumana ngakumbi i-KF94 Four Layer Filtration Mask (20 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
20. UTrend Stealth Air NIOSH ehambelana nesiqingatha seMask
Ixabiso: $ 19.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ilungile kwabo banxiba iiglasi
Iibhloko zeentsholongwane kunye neebhaktheriya
Ukufumaneka kweefilitha kunqunyelwe
Ayilungelanga zonke iimpumlo kakuhle
Ingxolo xa uphefumla
Ukuba ufuna i-NIOSH ehambelana nesiqingatha semaski ekuvumela ukuba unxibe iigogggs zokhuseleko okanye iiglasi ngexesha lokusebenzisa, I-TREND yesiqingatha semaski lukhetho oluqinileyo. Le maski icoca amasuntswana aphefumlwa ngumoya, inkungu, iintsimbi, umsi, uthuli, udaka, ikhonkrithi kunye nothuli lwesilica. Inamawele, ekulula ukuwatshintsha amacebo okucoca i-HEPAC agcinwe ngasemva kwiigrill ezixhonyiweyo ukuzikhusela kumswakama nakwiincinci kwaye inendawo enkulu yokucoca umhlaba.
Ngobuchule bokucoca ngaphandle kwe-99.97% yokusebenza kwi-0.3 microns nangaphezulu, le maski inika ukuphefumla ngokulula ukuya kuthi ga kwiiyure ezisibhozo ngexesha. Iifilitha okwangoku aziphelelanga kwiAmazon, nangona kunjalo, zisekhona Apha . Ukusuka kumava obuqu, le sesinye sezixhobo zokuphefumla ezinesiqingatha sobuso endizamile, ezenza ukuba ukunxiba kwakho kube lula nakuwe.
Fumana ngakumbi iTrend Stealth Air NIOSH Cornforming Half Mask ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
21. ililily Cotton Layer kabini enokuhlambeka ngobuso buso
Iyahlanjwa ngesandla kwaye iphinde isebenze
Ukuphefumla ngakumbi kwaye ukhululekile
Amalaphu endlebe anokutshintshwa
Igqume ngokulula ukusuka empumlweni yakho ukuya ezantsi kwesilevu sakho
Umaleko wokucoca ongatshintshiyo
Akukho siqwenga sempumlo yentsimbi sokuhlengahlengisa ukulunga ebusweni
Iyabiza imaski enye
Njengoko amashishini eqala ukuvula kwakhona, isikhokelo esivela kwiCDC sisacebisa ukuba sinxibe uhlobo oluthile lokugubungela ubuso njengendlela yokuzikhusela thina kunye nabanye. Kuba uninzi lwe-PPE lugcinelwe iingcali zonyango kunye nabaphenduli bokuqala, imaski yobuso bomqhaphu obuluqilima obuphindwe kabini inezibonelelo ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe.
Okokuqala, iyahlanjwa ngesandla, okuthetha ukuba ungayisebenzisa kaninzi. Inika isixa esifanelekileyo sokhuseleko, kodwa iyaphefumla kude kunePPE yokwenyani, ukuze ube nokukhululeka ngakumbi ngelixa uphumile iiyure ezininzi okanye ukuba uyafuneka ngoku ukuba ungene eofisini yakho. Le maski yomqhaphu ikwanazo nezinto zokucoca ulwelo ezakhelwe ngaphakathi ukukunika ukuhluza okungaphezulu kunesigqumathelo se-clot. Ngaba siyikhankanyile intle kakhulu?
Iluphu yendlebe iyahlengahlengiswa ngokutshintsha ukuze ukwazi ukwenza le maski ebusweni bakho. Le maski ingena ezahlukeneyo zokhetho lombala njengokuba.
Fumana ngakumbi ililily Cotton Double Layer Washable Face Mask information and reviews here.
22. I-Powecom KN95 iMaski yobuso (Ipakethi eyi-10)
Ixabiso: $ 13.60 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Uluhlu lweMeltblown lubonelela ngama-95% + ukuhluza
Ukuva kamnandi kwindlebe
Iimaski zibaleka zincinci
Inkqubo yokuqinisekisa ye-FDA inzima
Ulwazi lweelebheli olungahambelaniyo
Ukuba ufuna isiqinisekiso sokuba usebenzisa imask yobuso esemgangathweni, imaski yePowecom KN95 Ngokwenene kuluhlu lweemaski ezivunyiweyo ze-FDA ukuba zisetyenziswe ngexesha lobhubhane. Le pakethi ye-10 yeemaski ezinikezelwayo lukhetho olunokuthenjwa ngezo ntsuku xa ungekhe uhlale ukhuselekile ekhaya. Inika ukhuselo lwe-multilayer olunikezela ngama-95% + kwinqanaba lokucoca. Zibonisa ubuncinci bezinto ezinganyibilikiyo ezinyibilikisiweyo ezinyinyithekileyo zobungakanani obulinganiselweyo bokufumana ukufakwa kwamasuntswana afanelekileyo. Isihluzi se-electrostatic sisebenza ngokufanelekileyo ekuhluzeni amasuntswana. Isicoci sabo se-impedance esinevumba eliphantsi senza ukuphefumla kube lula ngakumbi.
Fumana ulwazi oluthe kratya lwePowecom KN95 Face Mask (10 Pack) kunye nokuphononongwa apha.
23.I-Base Camp M yoBuso beMask kunye neKhabhayithi yeCrafter yeCombo esebenzayo (2 Pack)
Ixabiso: $ 19.96 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukukhuselwa kwe-N99 ngezihluzi zecarbon ezisebenzayo
Kulula ukulungeleka ngokukhuselekileyo ukujongana nayo
Iindlela ezimbini zokukhupha ezenza ukuba kube lula ukuphefumla
Iza kunye neefilitha ezintandathu zokutshintsha
Iqhele ukwenza ukuba iindlebe zakho zinamathele
Imitya emfutshane yendlebe ibenza bangonwabi ngokukhawuleza ngakumbi kunabanye
Xa ulandela isigqubuthelo esikhuselayo kwizinto ezingumoya ezincinci njenge-2.5 microns, obu buso bobuso ipakethe ezimbini lukhetho olulungileyo. Le maski ixhomekeke kwiifilitha zecarbon ezikhuselekileyo ezikhuselwe kwimaski engenamandla kunye neendlela ezimbini zokukhupha iivelufa kunye nezinto zangaphandle zenayiloni. Imaski yenzelwe ukwenza ukumelana nomoya kuncinci ngaphandle kokucoca ulwelo.
Imaski ilupha phezu kweendlebe zakho kwaye ikhuseleke nge-velcro ngasemva ukuqinisekisa ukuba ufumana itywina elifanelekileyo. Isiqwenga sempumlo sikwanceda ukugcina imaski kufutshane nolusu lwakho, kwaye ukolulwa komda wokubopha kuyigcina ikwindawo nangexesha lomsebenzi onzima. Sithanda ukuba le maski iza neefilitha ezintandathu zokutshintsha, kodwa unoku-odola Ipakethe ye-10 yokutshintsha eya kuhlala ixesha elide.
Iifilitha ezinokubuyiselwa ezinokwakheka okuhlanu okubonelela ukuhluza ngobuchule. Uluhlu lokuqala lwe-spun-bond luhluza uthuli olunobungakanani be-micron; owesibini usebenze uluhlu lokucoca ulwelo lwekhabhoni lokucoca i-benzene kunye nemoto. Uluhlu lwesithathu nolwesine lucoca i-0.03-0.3 microns zothuli kunye namasuntswana. Umaleko wesihlanu we-spun-bond ucoca izinto ezahlukeneyo eziyingozi.
Fumana ngakumbi i-BASE CAMP N99 esebenzayo yeCarbon Dustproof Mask ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
24. Ukhathalelo lwee-Ply KF94 ezine Mask (10 + 1 Pack)
Ixabiso: $ 9.99 ngexabiso Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukucocwa kwamanqanaba amane kuthimba amasuntswana ukuya kuthi ga kwi-0.4PM
Izinto eziphathekayo ziphefumla ngokulula
Uyilo olufakelwe ngaphakathi kwestiriyo luqhelanisa nobume nobukhulu bobuso
Xa ujonge imaski yobuso ephefumlayo nenethezekayo, obu buso bune be-KF94 busi inokuba lukhetho ngelixa izinto zinqongophele. Ayinalo ulwazi oluninzi onokulindela ukulubona, ke siyacebisa ukuba uthenge ngomngcipheko wakho. Kodwa ke, iyafana uninzi lweemaski ezivunyiweyo kunye neziqinisekisiweyo esizibonileyo kwaye ixabiso lilungile. Ngaphezulu kwempumlo, ukubumba kuqinisekisa ukuba ukhuselekile kwaye kuyenziwe ngekotoni ecekeceke ukuze ube lula ngakumbi. Ukutyala okunemilinganiselo emithathu kuqinisekisa ukuba kuhambelana ncam nobuso.
Le maski ithembisa ukucoca i-94% yamasuntswana amancinci njenge-0.4PM, kwaye iza kwipakethe eyi-10 efanelekileyo kwaye ufumana imaski enye eyongezelelweyo ngaphandle kwentlawulo. Ukuba uyazibuza malunga nokuchongwa kwe-FFP2 xa kuthelekiswa neKN95, kunye nezinye iimaski, Oku kwaphuka kweMagnetic Whiteboard ibonisa umahluko kunye namanqanaba okucoca ulwelo ukuze uthathe isigqibo esifanelekileyo kwiimfuno zakho.
Fumana ngakumbi ulwazi lwe-KF94 yobuso bemaski kunye novavanyo apha.
25. V nguVye Ubuso beZikhuselo zaBantwana (i-10 Pack)
Ixabiso: $ 30.44 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
I-headband edibeneyo kunye ne-strap eguquguqukayo yenza ukuba kube lula ukulungelelanisa
Ukucoca ikhuselo leplastiki kukuchasana nenkungu
Intuthuzelo kuyo yonke imini yokunxiba
Sebenzisa enkulu kakhulu ngcono kubantwana abakhulu
Intambo yentloko iluhlobo oluthile lokubhabha
Eminye imiba yokuhanjiswa kwemveliso ichaziwe
Ukuba ujongene nethuba lokuba abantwana bakho kuya kufuneka babuyele esikolweni, uya kufuna ukubanika uhlobo oluthile lokhuseleko olufana nolu ubuso abakhusela abantwana . Ezi khaka zeplastiki zicacileyo zilingene abantu abancinci kwaye zibonelela ngobuso obugcweleyo ngothuli, amathontsi kunye nezinye izinto. Banento yokulwa inkungu yokubonakala okucacileyo ngelixa befunda kwaye ngenxa yokuphefumla ngokulula, zikhululekile kuneemaski ezinokuba nzima ukuzinxiba imini yonke, ngakumbi abantwana abancinci.
Ezi zikhuselo zinokuphefumla okuthambileyo kunye nebhanti yentloko ukugcina i-kiddo yakho intofontofo ngaphandle kwexesha lokunxiba. Banomtya wokulungelelanisa oguqukayo kunye nokugubungela okucacileyo okugubungeleyo ukulungiselela ukulunga.
Fumana ngakumbi iV ngeVye Face Shields yaBantwana (10 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
26. EMantla ngu-Honeywell NIOSH oVunyiweyo ophefumlelweyo opheleleyo wobuso
Ixabiso: $ 227,00 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Itywina leSilicone liqinisekisa ukuvuza simahla
Ukukwazi ukuhluza i-P100
Ilensi ye-polycarbonate eqinileyo-enzima ineendlela ezahlukeneyo zokujonga
Iifilitha neekhatriji mazithengwe zodwa
Ayifanelekanga kwabo banxiba iiglasi
Ukuba uthenga i-NIOSH evunyiweyo yokuphefumla ubuso, uyazi ukuba ungathembela lo mzekelo uvela eHoneywell ukuba phakathi kwezona zilungileyo. Iilensi zihlangabezana nemigangatho ye-ANSI yempembelelo ephezulu kunye nokumelana nokungena. Ilensi ye-polycarbonate enombala onzima ibonelela ngaphezulu kwe-200 degree-field-of-vision kwaye ikhusela amehlo akho kunye nobuso ngokuchasene neegesi ezicaphukisayo, umphunga, kunye nezinto eziphaphazelayo.
Ngelixa le yimaski kuphela, uya kufuna ukuthenga ifayile ye- I-P100 yegesi kunye neekhatriji zomphunga Kunye ne Iifayile ze-P100 zeefilitha eya kukunika ukhuseleko olupheleleyo kwiintsholongwane, ungcoliseko, kunye nezinye iingozi zokusingqongileyo. Isitywina se-silicone kwimbonakalo yobuso siqinisekisa ukungabinakho ukuvuza okungavulekiyo oko kuthetha ukuba uyakufumana ukusebenza okuphezulu okuqinisekisiweyo.
Inkqubo ebanzi yemitya yentloko iya kuqinisekisa ukuba le maski ihlala apho ikhoyo, nokuba wenza into enzima njengokubaleka kwimeko eyingozi.
Fumana ngakumbi eMantla ngu-Honeywell NIOSH Ulwazi oluVunyelweyo oluPheleleyo loBuso kunye nokujonga apha.
27. Isixhobo sokukhusela ubuso (i-20 Pack)
Ixabiso: $ 27.95 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Yongeza umaleko wokhuseleko xa unxibe iimaski zokucoca ezisezantsi
Ukulungelelanisa kakhulu ukulunga kwesiko
Inika umba opheleleyo we-visal
Okunokwenzeka ukuba kusebenze kubaphenduli bokuqala
Kushushu kunokuba unxibe imaski kuphela
Mhlawumbi awukwazanga ukufumana nantoni na ngaphandle kweemaski zoqhaqho ezisemgangathweni, uninzi lwazo ezinikezela ngamanqanaba amathathu okhuseleko. Ukuba uyi-EMT, umongikazi, okanye enye ingcali kwezonyango, okanye ungumntu osemngciphekweni ofuna ukhuseleko ngakumbi, ezi khaka zobuso zicacileyo unokongeza olunye umaleko lokhuseleko ngelixa ungachaphazeli amandla akho okuphefumla.
I-perimeter ye-flanged yandisa ukhuseleko lwakho kwabanye abantu abangazinxibanga iimaski, kwaye umbono ojikelezileyo awukuniki ikhefu ngokukhawuleza kwicandelo lakho lombono. Umtya wokuloba kunye nomtya owenza ukuba obu bhedu buguqulwe ngokungenasiphelo. Intambo yokubopha ehlengahlengiswe ngokupheleleyo ishukuma inyuke isezantsi ngokulula kwaye ilungele ukuhlala kakuhle kwimigogo nangokuphefumla. Unokwenza ngokwezifiso ubude beli khaka ngesikere esidala.
Fumana ngakumbi ulwazi olupheleleyo lweShield yobuso (i-20 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
28. Ukulahlwa kweMaski yaBuso boLuntu abathathu (50 Pack)
Ixabiso: $ 13.88 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Iphambili enombala ivumela ukuba ilingane uninzi lwabantwana ubuso bayo
Uyilo olwahlukileyo luvumela ukwanda kokuphefumla kunye nokuhamba komoya
Ilaphu le-Meltblown kunye nezinto ezingafakwanga zibambe uninzi lwamaqhekeza
Usetyenziso olunye kuphela
Kungcono kubantwana abancinci abangaphantsi kwe-10
Uyilo lunokwahluka kunoko kubonisiweyo
Ukuba awunalo ixesha lokungcungcutheka ngeemaski zobuso ezinokuhlambeka nezinokuphinda zisetyenziselwe abantwana bakho, siyifumana ngokupheleleyo, kodwa usadinga ukhetho lwemaski ezi maski zilahlwayo zolonwabo zabantwana . Ezi maski zomaleko zintathu ziza ngepakethi enkulu engama-50 kwaye unokufuna ukugcina ngaphambi kokuba izikolo ziqale kwakhona ekwindla. Umphambili ocoliweyo uyanda ngokulula ukuze ulingane phantse bonke ubuso bomntwana kunye nocingo lwempumlo lwentsimbi likuvumela ukuba uhlengahlengise ubume bempumlo yomntwana wakho.
Ilaphu le-Meltblown linceda ukunciphisa ukubonwa kwezinto ezinobungozi, kunye noyilo lokungenisa umoya olwahlukileyo, olunendawo enkulu yokungena kunye nomoya ophantsi, okwenza ukuphefumla kube lula kubantwana bakho. I-soft elastic ear loops zigcina zikhululekile yonke imini. Kwaye zininzi iindlela zoyilo ezinomdla zokukhetha kuzo kwaye ukuba uvumela umntwana wakho akhethe ezithandayo, iya kubenza ukuba banxibe ngaphandle kwesikhalazo.
Fumana ngakumbi iiMaski zoBuso eziLayekileyo ezintathu ezilahlwayo zaBantwana (50 Pack) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
29. 3M 6800 Ubunzima obunokuphinda busebenze isixhobo esiphefumlayo sobuso esipheleleyo
Ixabiso: $ 129,99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ukuthuthuzela ngokulula ukulungelelanisa
Iimpawu zobuso be-silicone zobuso kakuhle
Ikhusela kwakhona ukungcola okuvela emoyeni
I-Fit ibaleka kancinci
Izitena zinokukhululeka ekuhambeni kwexesha
Impumlo yekona ayinakuba mnandi
Xa ukhetha isiphefumli sobuso esipheleleyo, kuya kufuneka uthembele kwintuthuzelo kunye 3M 6800 iphefumla ubuso obupheleleyo ifaka uqwalaselo lomtya omathandathu oya kukugcina ekuhleleni uhlengahlengiso olonyusa ubungqongqo bokungcoliseka. Inomxholo okhethekileyo wokuthuthuzela owanga intloko yakho. Ukuhamba kwezivalo ezipholileyo kukugcina ungaziva ubushushu, kwaye into enkulu ejongene nesilicone inika uluhlu olubanzi lokubonakala ngexesha leemeko ezingxamisekileyo okanye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kwiindawo ezinobungcali.
Le maski ine-adapter yeziko eyahlukileyo eyalela umoya ophefumlelweyo kunye nokufuma phantsi kunye nokuphuma ukonwaba ngakumbi. Isihluzi sokuphefumla kunye neencamathiselo zeqokobhe kulula ukuzifaka njengoko zijija nokucima ngokulula. Iibhaskiti ezingabotshelwanga ziphelisa izixhobo ezikhululekileyo okanye ezilahlekileyo. Esi sixhobo sokuphefumla sinika imiyalelo elula yokuqinisekisa ukulunga okufanelekileyo nokukhuselekileyo kunye nokuthuthuzela kunye nokukhuselwa kungcoliseko lomoya.
Singacebisa ukuba ujonge ukukhuselwa kwe-N95, ucinga ezi zihluzo ze3M N95, nangona le mask yokuphefumla iza ezine zibandakanyiwe. Kukhuseleko olukhulu nangakumbi, I-3M yeegesi ezininzi / iiVoloridi zeVapor njengento ebalulekileyo kukhuseleko. Ukuze ufunde okungakumbi ngenkqubo yokufaka iikhowudi kwi-NIOSH kwezi khadriji, olu luhlu izakunceda.
Fumana ngakumbi i-3M Ultimate FX Full Facepiece Reusable Respirator yolwazi kunye nokuphononongwa apha.
30. KISCHERS Isiqingatha sokujonga ubuso kwakhona isixhobo sokuphefumla esinokusetyenziswa kwakhona
Iyahambelana nazo zonke iifayile ze-3M kunye neekhatriji ukuya kuthi ga kukhuseleko lwe-P100
Ulwakhiwo olucocekileyo lwesilicone
Kulula ukuphefumla kwaye uthethe unxibe
Kuquka iigogo zokukhusela kunye nemaski
Kuya kufuneka uthenge iikhatriji kunye neefilitha ngokwahlukeneyo
Iibhanti zentloko azihlali kamnandi kunezinye
Ukuphefumla komoya kuphuma kuphume
Ukuba ujonga ukhetho olusisigxina ngakumbi lokukhuselwa kwintsholongwane kunokulahla imaski ye-N95, le isixhobo sokuphefumla ilungile kwaye iyabiza. Sithanda ukuba iza nokulula kwayo ukufaka iicartridge zecrafter. Inoyilo lwebhanti ephambili yokuqinisekisa ulungelelwaniso olufanelekileyo olongeza kukhuseleko lwakho.
Isigqumathelo ngokwaso senziwe kwizixhobo eziphambili ze-silicone ezenza ukuba zikhululeke ngakumbi kunokhetho lobuso obunzima. Isivingco sokuPhola esiPholileyo senza ukuphefumla ngokulula kunye nokuthetha ngelixa ivelufa yomphunga ikhupha umkhonto kunye nokufuma ukuze ufumane intuthuzelo engakumbi. Imoji ezimbini zentloko yokubopha zilungelelanisa ngokulula imowudi esemgangathweni okanye eyehlayo.
Enye into edityanisiweyo-iza nemigqomo yokhuseleko ngokunjalo.
Fumana ngakumbi ii-KISCHERS Half Facepiece Reusable Respirator yolwazi kunye nokuphononongwa apha.
31. Iimaski zobuso ezihlambekayo + 8 Iifilitha zeCarbon ezenziweyo (4 Ipakethi)
Ixabiso: $ 13.99 ngexabiso Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Imaski ethambileyo yomqhaphu iyaphefumla kwaye inevalvu yokuphefumla
Iipakethe ezine ziza neefilitha zecarbon ezi-8 ezisebenzayo
Ukucocwa kwamasuntswana amancinci njenge-2.5PM
Ukutywina akulunganga njengeemaski zobuso bendabuko
Impumlo ehlengahlengiswayo ayanele ngokwaneleyo
Usaziva ushushu ukunxiba
Ukuba unolwazelelelo ngokunxiba isigqubuthelo sobuso, ezi maski zomqhaphu ziyaphefumla kwaye zinevefu yokuphefumla yokuzenza zikhululeke nangakumbi. Le pakethi ineemaski ezine iza neefilitha zecarbon ezenziwe zangama-8 ezinokuthi zitshintshwe ngokulula emva kokuba uzisebenzise amatyeli aliqela. Iifilitha ezinokutshintsha ezinokuvela zenza umsebenzi olungileyo wokucoca iinkcukacha ukuya kuthi ga kwi-2.5 PM. Zityibilika ngokulula kumkhono ngaphakathi kwesigqumathelo esifakwe ilaphu lokuthambisa lokuthambisa elilula kulusu kwaye liya kukugcina ukubila kancinci kunezinye izimbo zemaski.
Iifilitha zecarbon ezenziweyo zibonelela ngeendlela ezintlanu zokucoca ulwelo, kubandakanya umaleko onyibilikayo, umaleko wokucoca ulwelo, kunye namacwecwe amabini angalukwanga ukongeza kumaleko wekhabhoni. Into emnandi kukuba ungazihlamba iimaski ngokwazo-ukhetho olukhulu kwabasetyhini abanxibe izithambiso okanye nabani na onesikhumba esinamafutha okanye esibilayo ngokukhethekileyo. Babonisa iiluphu zelothe ezithambileyo kwaye kufanelekile ukuba zikulungele ukuphuma okuninzi.
Fumana ngakumbi iimaski zobuso ezihlambekayo + Iifilitha ezi-8 (4 yePakethi) ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
32. SYINE Ukhuseleko Half Ubuso bephefumla imaski ngezihluzi
Ixabiso: $ 29.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Inkqubo yokuhluza kabini iibhloko ezingama-96% zomphunga ohamba ngomoya kunye neenkcukacha
Ukuhamba komoya okuphezulu kwenza ukuphefumla kube lula
Iza kunye neefilitha zokutshintsha izinto
Itywina leSilicone liqinisekisa ukukhuselwa okungcono ngokuchasene nezinto ezingcolisayo
Kunzima kunabanye ukufumana itywina elilungileyo
Iifilitha zePlastiki ziqhekeka ngokulula
Inkungu yenkungu phezulu ngokulula
Imaski ye-N95 ikukhusela kwi-95% yomphunga ohamba ngomoya, kodwa ukuba ufuna ukuzikhusela nangakumbi, esi sisiqingatha semaski sokuphefumla linyathelo elifanelekileyo lokukhuseleka. Isixhobo sokuphefumla sibonisa inkqubo yokuhluza kabini ukuvimba ngokufanelekileyo iipesenti ezingama-96 zomphunga / iigesi, umsi, umungu, uthuli kunye namanye amasuntswana emoyeni.
Yenziwe nge-silicone ekumgangatho wokutya, le maski ingena kamnandi ebusweni bakho kwaye inamabhanti aphindwe kabini entloko ukuqinisekisa ukulunga okufanelekileyo. Uyakuphefumla lula kule maski ngenxa yokuhamba komoya okuhle. Iza kunye neekhatriji ezimbini zeefilitha ezinokutshintsha ezinokuhlala zihlala ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-200, ii-caps ezimbini, kunye neefilitha ezintandathu zokucoca ulwelo. Kuba le yimaski yobuso enesiqingatha, unokuba nexhala malunga nokukhuselwa kwamehlo. Beka ezo nkxalabo ecaleni.
Unga lula odola amagogo ngoku ukugcina abantu oontanga bakho nabo bekhuselekile.
Fumana ngakumbi ulwazi lweSYINE loKhuseleko lweHalf Mask kunye nolwazi kunye nokujonga apha.
33. Ukuphefumla kobuso uBandana (6 Pack)
Ixabiso: $ 15.98 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Inikezela ngeendlela ezili-12 zokugoba
Ukugquma ubuso okunceda ukukhusela abanye ekukhohliseni nasekuthimaleni
Iyahlambeka kwaye iphefumle
Iipakethi ezintandathu oza kwabelana ngazo
Ukhuseleko oluncinci kwabanye
Ilaphu lePolyester linokuziva lishushu
Masinyaniseke. Uyazi ukuba kufanele ukuba unxibe uhlobo oluthile lokugubungela ubuso xa uphakathi koluntu, kodwa imaski nje ayisosimbo sakho sobuqu. Ngena ezi bandanas zobuso onokwenza izinto ezili-12 ezahlukeneyo ngemveliso enye. Oku kugubungela ubuso ukufuma kunokugcina uthuli, ukubanda, kwaye kukukhusele elangeni nasemphefumlweni, kwaye ngelixa zinganikeli kwinqanaba elithile lokucoca ulwelo, ziyanceda ukugcina ukuthimla nokukhohlela kude kwabanye.
Iibhendi zobuso zihombisile kwaye zinomsebenzi, kwaye le ndlela ikuvumela ukuba uyisonge kwi-balaclava, entlokweni, kwimaski yobuso, entanyeni, kwi-foulard, kunye nokunye. Ngexabiso kukho iziqwenga ezisithoba, ke unokulinxibisa ngokufanelekileyo usapho lwakho ngokhuseleko olubonakala lupholile nalo.
Fumana ngakumbi ulwazi lobuso be-bandana kunye nohlaziyo apha.
Luthini ulwazi lwamva nje ngokuqhambuka kweCoronavirus?
Sifuna ukukugcina unolwazi ngalo lonke ulwazi lwamva nje malunga nokusasazeka kweCoronavirus. Heavy.com igcina uhlaziyo olusebenzayo bukhoma kwindawo yethu ukuze ufumane izinto ezintsha malunga nokuqhambuka eMelika nakwihlabathi liphela.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba imeko yakho okanye indawo yakho isemngciphekweni okanye phakathi kuqhambuko, COVIDActNow.org ilayishwe ngolwazi lwangoku.
Ukuhlaziywa kwexesha elide kwintsholongwane kuya kubonakala ngoku kubantu bonke ubudala. Iingcali zonyango kunye nezenzululwazi ziyaqhubeka nokubonisa inkxalabo malunga nexesha lomkhuhlane kunye nokunyuka kwentsholongwane ngaxeshanye, kuxinzelela iinkqubo zonyango kwilizwe liphela. Okwangoku lelona xesha lilungileyo lokwenza amalungiselelo okuhlala ukhuselekile.
Kuthekani ukuba andinakufumana imaski yeN95?
Ubukhulu becala, i-PPE ekumgangatho wezonyango efana neemaski ze-N95 kunye neziphefumli azisafumaneki eluntwini njengoko zibekwa phambili kwizibhedlele nakwabaphenduli bokuqala, nangona sikwazile ukuvelisa iintlobo zeempawu. Ukuba uyazibuza ukuba zeziphi iintlobo zeemaski kunye nokuphefumla onokuzifumana ukuze uzikhusele njengoko isizwe sivula, silapha ngezinye iindlela.
Zonke zibonelela ngenqanaba elithile lokhuseleko, kwaye usulelo oluthambekileyo kwamanye amazwe kunye nokuthambisa kwezinye, iindlela ezizezinye zeemaski ezingama-N95 ngumbono olungileyo kuwo wonke umntu. Ukuzimisela ngakumbi ekuzinxibeni, ngokukhawuleza sinokunciphisa ukusasazeka, kwaye ngokukhawuleza ubomi bethu bunokubuyela kuhlobo olutsha oluqhelekileyo.
Njengoko ubukho buyahluka, siza kugubungela oku kulandelayo:
Iimaski zeKN95 -Kukhuseleko lwe-3M, ezi maski zenziwa e-China. Banikela ngama-95% okucoca ulwelo kodwa hayi ukulunga okuqinileyo kokuphefumla.
Iimaski zeFFP2 -Ukutyunjwa kwemaski yaseYurophu kwiimaski ezifanelekileyo ezikhululekileyo ezibonelela ukuhluza okungama-94%.
Iimaski ze-N99 -IMaski ezixineneyo zilunge kakhulu kwaye ngokubanzi zinendawo yokuhluza yemithombo yeendaba, kodwa zinokunika i-95% yokuhluzwa kweenkcukacha.
Abaphefumli -Zomibini izixhobo zokuphefumla ezinobuso obugcweleyo kunye nobuso zixinekile ngaphezulu kwempumlo nomlomo kwaye zixhomekeke kwiicolorges ezahlukeneyo zokucoca ulwelo ukubonelela ngokuhlanjululwa kwizinto ezingcolisayo zangaphandle kwaye zinokufikelela kuma-95% ekukhuseleni ngokuchasene neentsholongwane.
Ubuso beZikhuselo -Zisetyenziswe ngokudibeneyo neemaski zobuso, ezi khaka zicacileyo zinokunceda ukukhusela ekusasazeni intsholongwane ngokweZiko leSizwe lezeMpilo.
Iimaski zobuso bengubo -Oku kuyacetyiswa yiCDC ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwentsholongwane. Amanqanaba okucoca ahluka ngokuxhomekeka ekubeni izinto zokucoca ulwelo zongezwa kulungelelwaniso lwelaphu, kodwa ufuna ubuncinci ubuncinci bezinto zokuzikhusela. Iimaski ezibonelela ngendawo ye- icarbon filter zisebenza ngakumbi.
Jongana neBandanas -Ezi zibonelela ngamanqanaba okhuselo ahlukeneyo kodwa akukho lwazi lovavanyo ukubonisa ukuba lingakanani. Imvumelwano evela kubaqeqeshi bezempilo ithi ukujiya kwengubo kulunge ngakumbi kokucoca.
Ngabazali abaninzi abajamelene nokubanakho ukuba abantwana babo babuyele eklasini, unokuba ujonge iimaski zabantwana bakho. Qiniseka ukuba ujonge ezo zinamanani amancinci kwaye zilungele ubuso bazo kakuhle, ngelixa uphefumla ngokulula. Ukuba ziprintwe kwiipateni ezimnandi, konke kuya kuba ngcono.
Kwakhona jonga iiplastikhi zobuso beeplastiki ezinobuso obukhaphukhaphu beemaski ngaphantsi njengenye indlela ekhululekile nenokuphefumla abantwana. Njengoko uza kuqaphela, sibandakanye uninzi lwezinto ezinokukhethwa ukuba zikuthathe njengoluhlu lwethu lweengcebiso.
Amazwe amaninzi ngokuthe ngcembe aqala ukuvula amashishini, ngelixa amanye ebuyela umva ngenxa yokunyuka ngokukhawuleza kwamatyala. Mhlawumbi kubaluleke ngakumbi kunakuqala ukunxiba uhlobo oluthile lokhuselo ebusweni kunye nokuqhubeka namasiko owafundileyo ukugcina usapho lwakho lukhuselekile.
Ngelixa ukhetho luza kuhamba ngokukhawuleza kwiAmazon, senza konke okusemandleni ethu ukukunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo ukuzikhusela kunye nabanye. Nangona singakhange sikwazi ukwenza uhlolisiso ngokobuqu, kwaye uninzi alunaphononongo ukusinceda senze isigqibo, sihlala sisenza konke okusemandleni ethu ukukuqaphela xa singakwazanga ukuvavanya ukhetho.
Kutheni le nto kufuneka ndinxibe iMask?
I-US inendlela ende ekufuneka ihambe phambi kokuba sidlule kulo bhubhane. Okwangoku, iCDC iyenzile iingcebiso ezithile malunga nendlela yokuzikhusela ngcono , kubandakanya ukunxiba imaski yobuso xa uphandle.
Njengaso nasiphi na isixhobo sokukhusela, kukho okungakumbi kukulingana kokusebenza kunokubeka nje isigubungelo ebusweni nasemlonyeni. Imaski efanelekileyo ngokufanelekileyo sisitshixo, kwaye eli nqaku leCDC upela ubuchule obuchanekileyo obuchanekileyo.
Ukuba usabuza imibuzo ngesidingo sokunxiba imaski, okanye uzama ukufumana ukuba yeyiphi enokuba yeyona isebenzayo kuwe, eli nqaku malunga nemaski yelaphu evela kwi-CNN iyenza icace Uyakufuna ubuncinci ubuncinci beelaphu zokukhusela.
Ngaba ezinye iimaski zithelekiswa njani neMaski yeN95 okanye isixhobo sokuphefumla?
I-3M Corporation ilungiselele itshathi ebanzi ukukunceda ubone umahluko. Ngelixa lithetha ngokwemiqathango ethile malunga nokuphefumla, ukuhluza, kunye nezinye izinto, itshathi ekwiphepha lesibini Olu xwebhu lunika uthelekiso olugqwesileyo.
Yeyiphi eyona nto ibonelela ngolungelelwaniso oluLungileyo lweemaski zelaphu?
Ngelixa sifunde inqwaba yamanqaku kwiimaski zelaphu kunye nemibono yemithombo yeendaba zokucoca ukuze uzisebenzise kunye nabo, singacebisa ukuba usebenzise ukhathalelo xa usenza isigqibo. Uninzi lwe-DIYers lucebisa ukusebenzisa iindawo zokucoca ulwelo kunye nezinye izinto. Ngokweengcali zonyango kwi-HealthLine, ezi zinokuqulatha ifayibha eyingozi kubandakanya i-fiberglass.
Iifilitha zekhabhoni ezinokuphinda zitshintshwe zifumaneka lula kwaye ukhetho olunamaxabiso afikelelekayo. Iifayile zecarbon okanye zelahle ezenziweyo zinokucoca ukungcola okuninzi, zongeze amandla okucoca kwimaski yelaphu okanye kwi-bandana.
Xa kuziwa kwiinkcukacha, ubungakanani bezinto. Uninzi lwezihluzi zekhabhoni zibamba amasuntswana ukuya kuthi ga kubungakanani be-2.5PM, ngelixa i-N95 yenyani yokuhluza imaski ichaza incinci njenge-0.3 ngobukhulu.
Zeziphi ezona Khatriji ziHlaziweyo ziBaphefumli?
Kukho uluhlu olubanzi lwezinto zokuphefumla kwintengiso, ukusuka kwisiqingatha sobuso bokuphefumla ezisetyenziselwa ukwakhiwa kunye nomsebenzi we-autobody ukuya kwiimodeli zobuso ezipheleleyo ezisetyenziselwa ukuvimba umsi kwipeyinti nakwezinye iikhemikhali. Kukho nezinye izinto zokuphefumla ze-CBRN ezisetyenziselwa imichiza, i-biological, i-radiological, kunye nomoya wenyukliya.
Bonke bathathe ukuthandwa ngakumbi njengoko umlo nxamnye neCoronavirus uqhubeka. Umntu ngamnye uthembele kwiikhatriji zeefilitha ukwenza umsebenzi omdaka. Iifilitha zeCarbon, izihluzo zeHepa, kunye nezinye izinto zokucoca zinokunika ezi ziphefumli ukuya kuthi ga kwi-99.97% esebenzayo ngokuchasene nongcoliseko lwangaphandle.
Iikhatriji zegesi lolunye ukhetho oludumileyo njengoko ziye zanyangwa ukuze zithathe iintlobo ezahlukeneyo zomphunga kunye nomphunga kubandakanya amasuntswana amahle kakhulu.
Ezinye iimaski zisebenzisa zombini iikhatriji zegesi kunye Iifilitha ezinje ngezi ukunciphisa ukubonakaliswa kwezinto ezithile. Banikezela ngokhuseleko lwe-P-100. Ukuba ubhidekile ngumahluko phakathi kwe-N ne-P njengoko inxulumene nemaski yobuso kunye neefilitha, ngelixa u-N kukuhluza into engeyiyo ioyile, ngelixa igama elingu-P lithetha ukuba ukhuselwe nakwizinto ezinamafutha njengamasuntswana epeyinti nokunye .
Kuba phantse zonke iimaski ezingenangubo zine-N, P okanye i-R, eli nqaku leCDC Unceda ukucacisa umahluko. Skrolela ezantsi kwiphepha letshathi.
Sincoma ukuba ujonge zombini iifilitha zokuphefumla kunye neekhatriji ezivunyiweyo ze-NIOSH, oko kuthetha ukuba bavavanywe kakuhle ziingcali.
Indlela esinokuyigcwalisa ngayo ijika kwaye oko kuthetha ntoni
Kwabo bazibuza ukuba kutheni wonke umntu ephakamile malunga nobhubhane we-COVID-19, ulivile igama elithi 'tyibilikisa igophe.' Oko kuthetha ukuba ukudideka kwezentlalo ukugcina uqhambuko lungaveli kwiindawo ezinkulu ezishushu. Le vidiyo ivela kwi-PBS sisilumko semizuzu esibhozo esihle kakhulu ukuba kuthetha ntoni kwaye kutheni kubalulekile.
INew York Times unayo uhlaziyo lwasimahla lwemihla ngemihla Kwi-COVID-19 kunye neziphumo e-U.S ukusuka kwiindlela ezahlukeneyo zokujonga. Le nkonzo ayihlawulelwa.
Ndingenza njani ukuze ndizikhusele njani ngexesha lamanqam?
Cinga ngezinto ezisisiseko iiveki okanye iinyanga xa unokuvalelwa wedwa ekhaya. Ukuba ifuthe leCoronavirus liya kuba libaluleke ngakumbi, uya kufuna ukucwangcisela ukubonelelwa kokutya okungxamisekileyo kwakamsinya kunakwelixa elizayo.
Ngaba unawo omnye umthombo wamandla? Ukuphuma kuhlala kunokwenzeka ngexesha lamaxesha obunzima. Ezi zitishi zamandla ziphathekayo zilungile kuyo nayiphi na imeko engxamisekileyo kwaye ungasoloko uzisebenzisa ukukhusela inkampu ngokunjalo.
Kunjani ukuphila neglaucoma
Ngawaphi amaqela asemngciphekweni omkhulu weengxaki zomkhuhlane?
Unyango lwasekhaya losulelo lwegwele phantsi kwebele
uthini umahluko phakathi kweklonopin kunye nexanax
Ungalufumana njani uncedo lwezonyango ngaphandle kweinshurensi okanye imali
indlela ekhawulezayo yokufumana umkhuhlane
Wenza ntoni njengengcali ekhemisi
Okona kutya kutyiwa xa ugula ngumkhuhlane